के मेरो बिरालोले धेरै drool | Noti बिरालाहरू
किन मेरो बिरालोले धेरै drool गर्दछ?
मोनिका सान्चेज | | जिज्ञासा, रोगहरू
बिरालाहरू जनावरहरू हुन् जसले यति राम्ररी दु: ख भोग्छन् कि उनीहरूले मात्र गुनासो गर्ने छन् जब तिनीहरूले अब लिदैनन्। तसर्थ, हाम्रो साथीको असुविधालाई छिटो पहिचान गर्न, र त्यस अनुसार कार्य गर्नको लागि उनीहरूको व्यवहारमा हुने परिवर्तनहरूमा ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक छ।
धेरै चिन्ताजनक लक्षण मध्ये एक अत्यधिक लार हो। कहिलेकाँही यसको अर्थ गम्भीर कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन, तर अरू समयमा यो पशु चिकित्सकमा जान आवश्यक पर्दछ किनकि तपाईंको जीवन खतरामा पर्न सक्छ। भनिएको छ, यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ भने किन मेरो बिरालो धेरै drool गर्दछ, यहाँ तपाईं आफ्नो उत्तर पाउनुहुनेछ।
1 अत्यधिक लारको उत्पत्ति
3 मुख दुख्ने
4 तनाव वा डर
5 मतली र / वा बान्ता
6 मुखमा विदेशी शरीर
7 खुशीको लागि
अत्यधिक लारको उत्पत्ति
अत्यधिक लार, को नामबाट पनि चिनिन्छ ptyalism, यो धेरै फरक उत्पत्ति हुन सक्छ। त्यहाँ अधिक र कम गम्भीर छन्, र ती निम्न हुन्:
यदि तपाईंको फरीले केही खराब हालतमा इन्जेस्टेड गरेको छ, वा यदि यो बाहिर जान्छ र कीटनाशकको ​​उपचार गरिएको घाँस खाएको छ भने, पहिलो लक्षणहरूमध्ये एउटा ड्रलिंग हुनेछ। तर यो थोरै लार हुनेछैन र त्यो हो, तर यसले फोम जस्तै कार्य गर्न सक्छ, त्यो हो यसले विस्तार र पूरै मुख ढाक्न सक्छ। यो पनि हुन सक्छ यदि तपाईंले यसमा पिपेट राख्नु भएको छ वा यसलाई फ्लाई र टिक स्प्रेले स्प्रे गर्नु भएको छ र यसलाई चाटिएको छ भने, यसरी उत्पादनलाई इन्जेस्टिंग गर्दै।
यो धेरै खतरनाक छ, त्यसैले यदि तपाईंले आफ्नो साथीलाई यस्तै झुकाव देख्नुभयो भने, यसलाई चाँडै सुक्खा कपडाले हटाउनुहोस्। यदि तपाईंलाई लाग्छ तपाईंको बिरालोलाई विष लागेको छ भने, यी हुन् बिरालाहरुमा विषाक्तताको लक्षण.
यदि तपाईंले चोटपटक पीडित हुनुहुन्छ, यदि तपाईंलाई दाँत, टार्टर, र / वा सूजन गमहरूमा संक्रमण छ भने, तपाइँले उत्पादित लार निगल्न समस्या हुनेछ, त्यसैले यो यसलाई 'हटाउने' झुकाव हुनेछ।
यो विशेष गरी बुढो बिरालाहरूमा देखा पर्दछ, जब उनीहरूलाई पहिले नै ओस्टियोआर्थराइटिस हुन थाल्छ, तर तपाईंको प्यारो कान्छो भए पनि, तपाईंले आफ्नो गार्डलाई कम गर्नुहुन्न.
तनाव वा डर
जब मानिस तनाव वा डराउँछन्, हामी हाम्रो नाडी दौड महसुस गर्दछौं, हाम्रा विद्यार्थीहरू अलग हुन्छन्, र हाम्रो शरीरले लड्न वा भाग्नको लागि तयारी गर्दछ। खैर, बिरालाहरु को मामला मा पनि यस्तै हुन्छ, तर लक्षणहरु को यो सेट को अतिरिक्त drooling थपिएको छ.
हामी उनलाई पशु चिकित्सकमा लग्नुपर्दा ऊ डुल्छ भन्ने कुरा हामीले देख्ने सब भन्दा साधारण अवस्था मध्ये एक हो। वस्तुतः कुनै पनि जनावर त्यहाँ जान मनपर्दैन, त्यसैले धेरै मानिसहरु छन्, किनकि उनीहरु स्थिति नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले आवश्यक भन्दा बढी लार उत्पादन गर्दछ।
नक्कली र / वा बान्ता एक बिरालो धेरै drool गर्न झल्किन्छ। यसले प्राय: हामीलाई धेरै चिन्तित गर्दछ, तर यदि बान्ता छिटो छ र जनावर ठीक छ भने, यसले केवल केश निल्यो र त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दछ। यद्यपि यदि यो अन्य लक्षणहरूसँगै हो वा यदि तपाईं लगातार धेरै दिनसम्म बान्ता गर्न थाल्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं पशु चिकित्सकमा जानु पर्छ। किनकि तपाईसँग हेयरबलहरू, आन्तरिक परजीवी संक्रमण, वा गम्भीर पाचन रोगको रोग हुन सक्छ।
मुखमा विदेशी शरीर
यदि तपाइँ तपाइँको खानाको बिरालोलाई स्क्र्याप दिनुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ उसलाई माछा वा कुखुरा दिनुभयो, यो सुविधाजनक छ दुबै काँढा र हड्डीहरू हटाउनुहोस् किनकी तिनीहरू तपाईंको बिरालाको मुख वा घाँटीमा टाँस्न सक्छन्, धेरै पीडाको कारण र पाठ्यक्रम पनि अत्यधिक लार।
तपाईं समस्या बिना माछा र मासु दिन सक्नुहुन्छ, तर माछा सफा गर्नु अघि। हड्डीहरू सधैं कच्चा हुनुपर्दछ, अन्यथा ती घुमाउन सक्छ। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ तिनीहरूका मुखभन्दा ठूला मानिसहरूलाई देओ ताकि उनी यसलाई चबाउन बाध्य छन्। त्यसोभए तपाईं एक स्वादिष्ट र प्राकृतिक भोजनको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, र तपाईंले चिन्ता लिनुपर्दैन 🙂।
यो बारम्बार हुँदैन, तर त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि धेरै drool जब तिनीहरू धेरै आराम गर्छन्केवल किनभने तिनीहरू धेरै सहज महसुस गर्छन्। तिनीहरूले यो गर्न सक्दछन् जब उनीहरू आफ्ना मनपर्ने खाना गन्ध र तपाईं कुनै पनि क्षण मा यो दिन जाँदैछन् भनेर थाहा छ।
म, यदि मैले तपाईंलाई सत्य कुरा भनेको हुँ भने, मैले मेरो बिरालोमा यस्तो व्यवहार गरेको देखेको छैन, तर मेरो कुकुरमध्ये एकमा। लारको मात्रा जुन 'निकालिन्छ' प्रभावकारी छ जब उनी खुसी छिन्, वा जब उनी घबराइएकी छिन् किनभने उनलाई थाहा छ हामी उनलाई कता जान मन पराउछौं।
गर्नु पर्ने? केहि पनि छैन, केवल तपाईको प्यारी खुशी देखेर रमाईलो गर्नुहोस्। यो भन्दा राम्रो उपहार के होला?
अत्यधिक लार वा ptyalism शरीरलाई केहि यस्तो चीजको प्रतिक्रया हो जुन यसलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ, जस्तै मुखमा विदेशी निकायहरूको अवस्थामा, वा शान्ति, आराम र / वा खुशीको लागि। यो पशु चिकित्सकमा जाने वा नजानेमा निर्भर गर्दछ, तर हामीले के जान्नुपर्दछ कि जब बिरालो ठीक छैन, उसलाई एक भेट तिर्ने चोट छैन ठिक छ, हामीले हेरेका थियौं कि झुल्नु रोगको सूचक हुन सक्छ।
मलाई आशा छ कि यस विशेषले तपाईको प्रश्नको समाधान गरेको छ किन मेरो बिल्ली धेरै drools। यदि अन्तमा तपाईंसँग समस्या छ, धेरै साहस र शान्त / a, के रिकभरी सामान्यतया द्रुत हुन्छ। चाँडै ऊ सधै जस्तै हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » जिज्ञासा » किन मेरो बिरालोले धेरै drool गर्दछ?
माला फेरेस भन्यो
मेरो बिरालो आज रात आज धेरै drools तर सामान्य रूपमा खेल्छ, खान्छ र पिउँछ।
उसले आफ्नो मुखमा केही पनि चिच्याएको छैन।
तर मलाई डर छ कि ऊ डिहाइड्रेट भएर मर्नेछ।
यो पहिलो पटक हो कि तपाईं मसँग सुत्न चाहनुहुन्न
माला फेरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
हुनसक्छ उसले केही कुरा निल्यो जुन उसले पाउनु हुँदैन। यदि यो बिग्रन्छ वा तपाईंले सुधार देख्नुहुन्न भने, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईं यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
नमस्कार, मसँग kit बिरालाको बच्चा छ, तिनीहरू दुई महिना पुरानो छ तर म देख्छु कि तिनीहरूका आँखा परिवर्तन भएको छैन र तिनीहरू सँधै नराम्रो व्यवहारमा छन्, म तिनीहरूलाई कसरी सफा गर्न सक्छु वा यसको लागि कुनै औषधि छ, धन्यवाद
तपाईं तिनीहरूलाई सफा गाउजको साथ सफा गर्न सक्नुहुनेछ क्यामोमाइल इन्फ्युजनमा गीलो।
तर यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि ती3दिनमा सुधार हुँदैन, यो उत्तम छ कि तपाइँ तिनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् जाँच गर्न र तपाइँलाई आँखा ड्रप दिनुहोस्।
मेरो बिरालो केहि घण्टाको लागि अत्यधिक drooling गरीरहेको छ, उसको जिब्रो को टुप्पो रातो छ, उहाँ खान चाहनुहुन्न र सधैं भोको छ, उहाँ सुत्न चाहानुहुन्छ। यो रात हो र म उनलाई भोलि डाक्टरमा लिन सक्दिन, यो के हुन सक्छ? म तिमीलाई कसरी मद्दत गर्ने?
मेलिसालाई जवाफ दिनुहोस्
एंजेलिका पारडो भन्यो
केही दिन अघि हामीले थोरै बान्ता भेट्टायौं, तथापि उसले त्यो दिन राम्रोसँग खायो, त्यहाँ उसले लार लाग्न थाल्यो। अर्को दिन उनीले सबै दिन केहि खाएनन् र हामीले उनलाई सबै कुखुरा, बिरालाको खाना र केही केहि नराम्रो व्यवहार गर्‍यौं, उनी उनको मुख लिन लागिरहेकी थिइनन् र उनी छोडिदिनन्, रात सम्म उसले खाएकी १/1 २ t घण्टा पछि ट्युनाको एउटा क्यान। उसले धेरै नुहाउन जारी राख्छ र आफूलाई आफ्नो मुखमा लिन अनुमति दिँदैन। म के गरौ?
एंजेलिका पारडोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंलाई आफ्नो मुख र / वा घाँटीमा दुखाइ वा असुविधा हुन सक्छ। यदि उसले आफैंलाई समात्न दिदैन र यदि तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यसबाट उसले खाने छैन वा खान चाहँदैन भने, मेरो सल्लाह तपाईलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु हो। यो दाँतमा दुख्ने मात्र हुन सक्छ, तर यो विशेषज्ञको स्याहार चाहिने भन्दा खराब हुन सक्छ।
भर्जिनिया जिमेनेज भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालोले उसको आँखाबाट केही अनौठा चीजहरू निकालिरहेको थियो; केहि पातलो, जस्तै legaña। खैर, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें र तिनीहरूले मलाई धेरै खोपहरू दिए र भाँडामा पिपेट दिए। हिजो देखि ऊ drooling छ जब उसले कहिले त्यस्तो गरेन। उसको मुखबाट एक धेरै दुर्गन्ध पनि आउँदैछ। यसको लागि कुनै कारण? धन्यबाद।
भर्जिनिया जिमेनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ कि तपाइँलाई मौखिक समस्या छ, वा तपाइँ पिपेटबाट एलर्जी भएको हुन सक्छ।
जे भए पनि, पशु चिकित्सकलाई देखेर चोट लाग्दैन।
अना Milena Muñoz Pineda भन्यो
मसँग दुई दिनसम्म मेरो बिरालाले मुखमा झुकाइराखेको छ, यदि उसको आवाज थोरै घटेको छ भने ऊ उहि उही मउइडो होइन तर उसले राम्ररी खाएको छ, उसले उही नै खाएको छ, उही उस्को खेल्यो तर म यसको बारेमा चिन्तित छु। बबिता। मैले यसलाई प्रशस्त मात्रामा पानी दिएँ र दूध पनि। तर यो बन्द हुँदैन, म चिन्तित छु
Ana Milena Muñoz Pineda लाई जवाफ दिनुहोस्
पहिलो कुरा यो हो कि तपाईसँग कुनै मौखिक स्वास्थ्य समस्या छ कि भनेर हेर्नु हो। यो हुन सक्छ कि तपाइँसँग एक वा बढी संक्रमित दाँत छन्, र त्यसले पीडा निम्त्याउँछ। जे भए पनि, पशु चिकित्सकलाई भ्रमण गर्न पैसा तिर्ने छैन।
क्याथरिन एस्ट्राडा भन्यो
मेरो बिरालोले धेरै छुटकारा दिन्छ, र यस्तो देखिन्छ कि त्यसले उसलाई मिर्गीको दौरा दिन्छ, तर जब उनी यस्ता प्रकारका दौडहरूमा हुन्छन् तब म उसको नामबाट बोल्न थाल्छु र उ टाढा जान्छ, के हुन्छ?
क्याथरीन एस्ट्राडालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई सम्भवतः मिर्गी छ। यो विकार केहि आघातको कारणले हुन सक्छ, वा आनुवंशिक समस्याको कारणले हुन सक्छ। जे भए पनि, तपाईलाई विशेषज्ञले जाँच गर्नु पर्छ ताकि तपाईको जीवनको गुणस्तर बिग्रन नपरोस्।
मेरो बिरालाले मुख संक्रमणको लागि एन्टिबायोटिकको ईन्जेक्सन पछि धेरै drools
तपाईंले इंजेक्शनमा एलर्जीको प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो। यो एक राम्रो विचार हो यो आफ्नो पशु चिकित्सक द्वारा जाँच गरीएको छ, बस मामला मा।
नमस्ते, मैले मेरो ब्लकको ढोका अगाडि एउटा वयस्क बिरालो भेट्टाएको छु, सडकमा, मैले उसलाई बोलाएको छु र उसले देखेको छ कि म घोर चिन्तित छु किनकि म उसलाई मद्दत गर्न चाहन्छु र मलाई थाहा छैन। ऊ आफैंलाई छुने अनुमति दिन्छ, मैले उसको टिनमा मासु र तरकारीहरू राखेको छु तर उसले खाँदैन, मैले उसमा पानी हालेको छु र उसले पिउँदैन, ऊ सडक मानिस हो, अत्यन्तै मायालु, ऊ मात्र चाहन्छ लाड, ऊ एकदम पातलो र फोहोर छ, र उसले कतै कतै हराइरहेको छ जसमा उसले केश काटिरहेको छ, तर एकदम थोरै, जस्तो कि उसले अन्य सडक बिरालाहरूसँग लडेको छ, ऊ स्पष्ट रूपमा घाइते छैन, मैले उसलाई केही राम्रो छाला दिएँ र ऊ मात्र खान चाहन्छ। कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई के गर्ने थाहा छैन ...! :_( धन्यवाद
नायारालाई जवाफ दिनुहोस्
कुनै पनि प्रकारको खाना बिरालालाई आकर्षित गर्न मान्य छ: फ्युट, हेम, ट्युनाको क्यान ...
यदि यो मायालु छ भने, यो सायद कसैको हो, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, म यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु कि योसँग माइक्रोचिप छ कि छैन भनेर।
बाँकी को लागी, यदि अन्त मा यो बाहिर जान्छ कि यो कसैको छैन र मायालु हुनु को लागी तपाइँ कुनै पशु आश्रय सम्पर्क गर्न को लागी हेर्न को लागी उनीहरु यसको लागी एक परिवार पाउन सक्नुहुन्छ भने।
योलान्डा मिलाग्रोस भेगर टेलो भन्यो
नमस्ते, म मेरो बिरालोलाई धेरै drooling को बारे मा धेरै चिन्तित छु र जब यो हुन्छ, उसले खाँदैन र यस्तो महसुस नगरी पोसिन्छ। मैले उनलाई एक हजार चोटि भेटरिनियो लैजान्छु र तिनीहरूले मलाई अनौंठो केहि पनि बताउँदैनन्?
Yolanda milagros vergara Tello लाई जवाफ दिनुहोस्
बिरालाहरू कहिलेकाँही दु: खित हुन्छन् जब उनीहरू आराम र शान्त हुन्छन्। यदि पशु चिकित्सकले केहि अनौंठो देखेको छैन भने, तपाईको बिरालो यस्तो देखिन्छ। जहाँसम्म, तपाई जहिले पनि दोस्रो पशुचिनोको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ।
नमस्ते ... मेरो बिरालोले कतैबाट धेरै drool गर्न थालेको छ ... पानी वा पानीको टुक्राहरू जस्तै र उनको सानो नाक एकदम ठूलो भिजेको छ ... उनको एक बच्चा छ ... मलाई थाहा छैन के गर्ने
Deysi लाई जवाफ दिनुहोस्
जब कुनै बिरामीले कुनै स्पष्ट कारणको लागि धेरै drool गर्न थाल्छ, यो हुन सक्छ किनभने यसले त्यस्तो चीज निल्यो जुन यो नहुनु हो, त्यसैले यसलाई पेशागतले जाँच गर्नु पर्छ किनकि यो रोगको शुरुवात हुन सक्छ।
मेरो बिरालो अत्यधिक drools र धेरै सुत्छ, दिन को सबै भन्दा, उनी पहिले जस्तो बाहिर आउँदैनन् .. उनी उठ्न चाहिन तर सामान्य खाना खान जारी राख्छिन् .. तपाईंको drool पहिले नै खराब गन्ध छ ..
एक हप्ता भयो ऊ यस्तै भयो। ।
तपाइँ के सोच्नुहुन्छ त्यसबाट, यो परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हो। हुनसक्छ तपाईंले केही यस्तो चीज निल्नुभएको छ जुन तपाईंसँग राम्रोसँग बसेको छैन वा तपाईंलाई रोग लाग्न थाल्छ। त्यो केवल एक पेशेवर द्वारा ज्ञात हुन सक्छ।
नमस्ते एन्ड्रिया, के तपाईंले उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्नुभयो? तिनीहरूले तपाईंलाई केही निदान दिए। मेरो बिरालो उही चीज बाट गइरहेको छ 🙁
मेरो बिरालोले एक तारमा बिट गर्‍यो र म drooling थियो ... रगत बाहिर आउँछ जब म यसलाई दुखाइ रिलीभर वा एन्टिबायोटिक दिन्छ
तपाईले बिरालालाई स्व-औषधि लिनुहुन्न, किनकी यो झन खराब हुन सक्दछ।
यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ। उसले के गर्ने थाहा छ।
येसिका सान्चेज भन्यो
नमस्ते मेरो बिरालो, हिजोदेखि ऊ खान चाहँदैन, र हरेक चोटि म उनीसँग कुरा गर्छु, मैले याद गरे कि उनले धेरै पेय पदार्थ फ्याँक्यो र सक्रिय छैन।
येसिका सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईले नलिएको केहि चीज निल्न सक्नुहुन्छ? तपाईलाई पेट दुख्न सक्छ, त्यसैले यसलाई विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्नुपर्नेछ।
जेभियर डियाज भन्यो
नमस्कार, शुभ बिहानी, मेरो बिरालालाई रेबीजको खोप लगाईएको थियो र तीन दिन पछि ऊ बाँझ पारेको थियो, अपरेसनको तीन दिन पछि र अहिले उनी खान चाहँदैन र उसले धेरै पिल्स्यो, उसले आफ्नो शंकु उसको घाँसमा प्रायः सबै पटक ल्याएको छ। किनभने डाक्टरले days दिनको अवधिमा सिफारिस गर्नुभयो तर यसले उनलाई धेरै परेशान गर्दछ, म उनको लागि चिन्तित छु, धन्यवाद।
Javier diaz लाई जवाफ दिनुहोस्
कहिलेकाँही खोपहरू र / वा औषधिहरूले जनावरहरूमा प्रतिक्रिया निम्त्याउँछ।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् उहाँलाई जाँच्नुहोस्, र यदि कुनै प्रतिक्रिया भएको थियो भने, खुराक कम गर्नुहोस्।
अभिवादन र धेरै प्रोत्साहन।
जुलिया Ines Zapata भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालोले धेरै व्यर्थका छ, उसको तल्लो दाँत छैन र उसको इण्डिया सेतो सेतो छ
जुलिया Ines Zapata जवाफ
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् तपाईंसँग के गलत छ ठीक तपाईंलाई बताउन।
जूरी गुटेरिज भन्यो
हेलो .. मसँग 8 बर्षको उनको बिरालो छ ऊसँग धेरै बाक्लो drool छ र कहिलेकाँही उनी दुर्गन्धित हुन्छन् र हामीले उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं उनीहरूले केही दाँत बाहिर निकाले तर उनीले सुधार गरेनन्।
यसलाई सुधार गर्न के आपूर्ति गर्न सकिन्छ?
जुरी गुटेरिजलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उसलाई दोस्रो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् उहाँलाई जाँच्नुहोस् र तपाईं कुन औषधि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ।
अल्मा नाटिभिडड कोलोन लोपेज भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालो सानो drooling छ, के कारण यो हो?
Alma natividad colon lopez लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो थोरै मात्र हो, र केही परिस्थितिहरूमा तपाईलाई धेरै सहज लाग्न सक्छ। तर यदि तपाईले नयाँ लक्षणहरू देखापर्नुभयो, जस्तै दु: खको सास, टार्टरको उपस्थिति वा दाँतको क्षति, वा यदि तपाईले उनी खराब महसुस गर्न थाल्छ वा खाना खान छोड्नुभयो भने, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार, मेरो बिरालो, यो तेस्रो पटक हो कि मैले उनलाई पशु चिकित्सकलाई समान कारणका लागि लिएको छु, ऊ धेरै drools र मलाई अब थाहा छैन के गर्ने…। उसले पहिले नै पहिलो पटक ठीक गरिसकेको हुनुपर्दछ ... .. कुनै औषधि जुन म उसलाई दिन सक्छु?
पाओलालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तर म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन। औषधिहरू पशु चिकित्सकले मात्र सिफारिस गर्न सक्छन्, मँ छैन।
मेरो सुझाव छ कि तपाईं अर्को पशु चिकित्सकमा जानुहोस्, दोस्रो विचारका लागि सोध्नुहोस्।
मिशेल मेन्डोजा भन्यो
मेरो बिरालाको बच्चा झन्डैaदिनको लागि धेरै drooling छ, तर drool उनको मुख मा जम्मा हुन्छ र केही पातलो हुन्छ, यस बाहेक मलाई लाग्छ कि यो drool केहि खराब गन्ध आउँछ: c म डराउँछु! यो के हुनेछ?
मिशेल मेन्डोजालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईंको बिरालोले धेरै व्यर्थका छ र उसको मुखबाट पनि दुर्गन्ध आयो भने उसको एउटा दाँत वा मुखको अर्को भागमा स probably्क्रमणको समस्या हुन सक्छ।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि पशु चिकित्सकलाई हेर, उसलाई के हुन्छ ठीक जान्न।
यदि तपाईं ती परिस्थितिहरूमा मात्रै गर्नुहुन्छ, हो, यो पूर्ण सामान्य छ।
त्यो उमेरमा बिरालाहरूलाई मौखिक समस्याहरू हुनु सामान्य हो। दाँतले धेरै लुगा लगाउन थाल्छ, प्रतिरक्षा प्रणाली अब त्यस्तो छैन जुन तपाईं जवान हुनुहुन्थ्यो, र त्यो त जब सास फेर्न सक्छ।
दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै प्राकृतिक उपचार छैन। सबै भन्दा राम्रो कुरा उहाँलाई पशु चिकित्सकमा लगेर उसलाई राम्रोसँग जाँच गराउनु हो, र तपाईलाई के गलत छ भनेर बताउन, र उपचार के हो भनेर।
मेरो बिरालो एक दिन पहिले धेरै drools एक परिवार को सदस्यले केहि तातो पानी छोडे, उनी त्यो पानी पिउन चाहन्थे र जलाए, उनी भागेर गए र त्यसपछि उनले धेरै drooling गर्न शुरू गरे, यो एक दिन लाग्छ त्यसैले म उसलाई लिएर जानु पर्छ। पशु चिकित्सक वा यो जलाइएको पछि एक साधारण असुविधा हुन सक्छ?
यदि तपाइँ ड्रोल गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, यस्तो लाग्दछ कि दाउरा गम्भीर थियो। यसले पशु चिकित्सकलाई भेट्न चित्त दुखाउँदैन।
मेरो बिरालो drools जब उहाँ घर भित्र pee र दिन को लागी एकै ठाउँमा सधैं हो। सामान्यतया उसको आवश्यकता बाहिर वा पनमा गरिन्छ। मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगिसकें। तपाईं किन drool र एक साथ पेशाब गर्न थाहा छैन। उनले भेगाजा जाँच गरे र यो ठीक छ।
क्यानलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको बिरालोलाई के हुन्छ भनेर हास्यास्पद।
के तपाईले कुनै एनालिटिक्स गर्नुभयो? यदि तपाईले कुनै ठाउँमा पिसाब गर्न शुरु गर्नु भएको छ जहाँ तपाईले पहिले नगर्नु भएको हो भने यो तपाईलाई संक्रमण भएको कारणले हुन्छ, वा तपाईलाई कुनै प्रकारको तनाव भएकोले वा कुनै पनि कारणको लागि (उदाहरणको लागि तपाईलाई नराम्रो अनुभव भएको थियो)। अब जस्ता त्यस्तो मन हुँदैन जहाँ उनी सँधै आराम गर्थ्यो।
म उहाँलाई त्यहाँ आराम गर्न को लागी एक कूचो ट्रे राख्न सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईले देख्नु भयो कि उनी अचानक सामान्य भन्दा बढी पानी पिईरहेछन्, वा यदि तपाईले थकित वा सुची नभएको देख्नुभयो भने, मेरो सल्लाह तपाईलाई फेरि यो लिनु हो, किनकि यो हार्मोनल रोगको लक्षण हुन सक्छ।
नमस्कार, मेरो बिरालो, ऊ धेरै पासोमा लाग्यो, ऊ खेल्दैन, ऊ एकपट्टि राख्छ, जुन ऊसँग हुन्छ, ऊ ज्यान लिन पनि थाल्छ
तपाईंलाई मौखिक समस्या हुन सक्छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ उसलाई जाँच्न र तपाईसँग के छ भन्नुहोस्।
नमस्कार, मेरो बिराला श्वासप्रश्वासको समस्याको साथ हो र उनीहरूले उनीलाई रेसिपी सल्लाह दिए, उनले 3,4.. manage मिलिमिटर प्रबन्ध गरेनन र दगुर्दै घर भरि घर भत्काउन थाले, के यो प्रतिक्रिया हो?
क्लाउडियालाई जवाफ दिनुहोस्
यो एक बिन्दु सम्म सामान्य हुन सक्छ। यो तपाईं कसरी अब निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ भने, यो यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंलाई औषधी मन परेन।
ब्रान्डा रुवालकाबा भन्यो
उत्कृष्ट जानकारी Mon धन्यवाद मोनिका! मेरो केसमा, मेरो बिरालाको बच्चालाई मूत्र पथमा संक्रमण छ र तिनीहरूले एउटा सिरप दिएका थिए जुन अघिल्लो टिप्पणीमा मैले उनलाई २ एमएल दिएँ र अचानक उनी घिनलाग्दो भयो र औषधि बान्ता गर्ने प्रयास गर्छिन्, बाहिर निकाल्न सक्षम भएन, के उनी धेरै व्यस्त छिन्: वा म यो सोच्न चाहन्छु कि यो निश्चित छ कि यो औषधी एक बिट पनि मन पर्दैन, किनभने उसलाई केवल गन्ध आउँछ र उनीहरूले उसलाई बकवास बनाउँछन् 🙁
ब्रेन्डा रुवालकाबालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो -
हो, तपाईंले सायद स्वादलाई घृणा गर्नुहुन्छ र त्यसैले यो हुन्छ कि तपाईं उसलाई त्यसलाई दिनुहोस्। तर कहिलेकाँही कुनै विकल्प छन, हेम।
मैले उनलाई फिडो ब्रान्डको स्प्रे स्प्रेमा छिराइदिए तर केहि बेरमै हामीले थाहा पाय कि उनी अलि अलि गर्दै थिईन् र उनी आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्दैछिन् तर उनी अब झोलिरहेकी छिन् र उनी पानी पिउन चाहन्नन्। थाहा छैन यदि स्प्रेले उसलाई यो गरिरहेको छ र तिनीहरू जनावरहरूको लागि के गर्दै छन् यदि उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू एक अर्कालाई चाट्छन् तर जे भए पनि मलाई थाहा छैन के गलत छ ...
तपाईंसँग स्प्रेमा एलर्जीको प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यदि ऊ आज राम्रो छ भने, ठीक छ, यदि पशु चिकित्सकलाई नलगाउनुहोस् किनभने उसलाई विष लाग्न सक्छ।
सर्जियो मोंगे भन्यो
मसँग एउटा बिरालो छ जुन सामान्य रूपमा सूज गर्दछ जब आराम गरी रहन्छ र तपाईंको छातीमा रहँदा, यो झर्छ, जो कष्टप्रद छ किनकि यसले तपाईंलाई हल्लाउँछ र भिज्यो, तर यो रहन्छ, त्यसैले म यसलाई स्वीकार्छु। तर यदि यसले मलाई प्रहार गर्‍यो कि यसले सम्भावित अवस्था वा रोगका लक्षणहरूसँग सम्बन्धित छ, थोमसको सन्दर्भमा, म उसलाई पापी थिए जबदेखि उहाँ पपी हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ कि त्यो किशोर छँदादेखि नै त्यस्तो भएको छ।
सर्जियो मोंगेलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, कहिलेकाँही उनीहरूले त्यसो गर्छन् किनकि तिनीहरू आराम पाउँछन्, जस्तो तपाईको बिराला थॉमसको बारेमा हुन्छ। तर यदि उनीहरूले त्यो कारणका लागि कहिल्यै त्यसो गरेनन्, र एक दिन तिनीहरू किन थाहा नपाई डुब्न थाल्छन्, यो सम्भवतः रोग वा विषाक्तताको कारणले हुन्छ।
नमस्कार, मेरो बिरालो months महिना पुरानो हो, र ऊ मेरो खुशीको लागि सोच्ने धेरै चीजहरू निकाल्छ किनकि त्यसले मेरो बग्लू र प्युरसमा सुँघ्छ र आफ्नो खुट्टा ताजा गर्न थाल्छ यदि ठाउँ नरम पार्दै, तर ऊ मेरो शर्ट भिजेको हुन्छ, के यसलाई रोक्न सकिन्छ? यसले मलाई पिरोल्छ कि म भिजेको छु।
बिरालाहरू ज्यादै आरामदायक भएको बेलामा लोभी हुनु सामान्य हो तर पशु चिकित्सकलाई रोग लाग्ने रोग लागेको खण्डमा पशु चिकित्सकलाई भेट गर्नु चोट पर्दैन।
तर यदि तपाइँ राम्रो स्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ दुर्भाग्यवश drooling लाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्न।
नमस्ते मोनिका। २० दिन अघि मैले सडकमा कुपोषण, डिहाइड्रेटेड र उनको घाँटीमा चोटपटकको स with्केतसहितको एउटा बिरालो भेट्टाए जुन अर्को बिरालोले टोकेको जस्तो देखिन्थ्यो। यो संक्रमित थियो। म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनले मलाई एक हप्ताको लागि अमोक्सिसिलिन पठाए। औषधिले राम्रो प्रभाव पा .्यो, किनकि मेरो घाँटीमा भित्रपट्टि भएको स ,्क्रमणले यसलाई अधीनमा राख्यो। ऊ मेरो घरमा आएदेखि उनी राम्ररी खाना खाँदैछिन्। समस्या यो छ कि जब उनी सुतिरहेकी हुन्छिन उनी drools र राम्रो गन्ध छैन। म उनको दैनिक व्यवहारमा एक धेरै राम्रो दृष्टिकोण संग उनलाई देख्छु। उनी अब बिरामी देखिँदैनन्। जब म पहिलो हप्ता उनको घरमा ल्याएँ जब उनले के गरिन् सुतिरहेकी छिन् र खाद्यान्न अर्डर गर्नका निम्ति मात्र उठे। उसको घाँटी निको भए पछि ऊ अपार्टमेन्ट भर भइरहेको छ। म उसको सासको दुर्गन्धको बारेमा चिन्तित छु।
तिम्रो उत्तरको लागि धन्यवाद।
धामेलीलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा पहिले, तपाइँको बिल्लीको बच्चा the को पुनःप्राप्ति मा बधाई छ।
सास फेर्ने सन्दर्भमा यो हुन सक्दछ किनकि तपाईलाई मौखिक समस्या छ: सूजन गम, टार्टार, जि g्गिभाइटिस।
म तपाइँलाई उनको पशु चिकित्सकमा फिर्ता लैजान सिफारिस गर्दछु उसको मुखले राम्रोसँग जाँच गर्न र समस्याको उपचार गर्न।
नमस्ते, मसँग एउटा बिरालो छ जुन मेरो घरमा आई र हामीलाई मालिकको रूपमा ग्रहण गर्‍यो। उनी सोच्छिन् कि उनी गृहिणी हुन्, उनी धेरै स्वतन्त्र छिन् र धेरै राम्री छिन् र उनको विशेषता यो हो कि जब उसले उसको हेरचाह गर्छि उसले धेरै छुटकारा दिई, उनी खुशी छिन्।
यो समस्या हुन सक्छ किनकि तिनीहरूको उपस्थिति वा व्यवहारमा कुनै अनौंठो कुरा देखिंदैन?
एलेनालाई जवाफ दिनुहोस्
चिन्ता नगर। त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि धेरै drool जब तिनीहरू धेरै आराम महसुस गर्दछन्, जस्तो लाग्छ तपाईंको बिरालोको जस्तो।
मोनिका डेलगाडो भन्यो
मसँग--महिना पुरानो बिरालो छ र केहि दिन अघि मैले एउटा अर्कोको लागि मलाई स्वीकार गरें जुन दिन मसँग थियो, र त्यस दिनदेखि यसले धेरै काम गरिसकेको छ र हामीलाई एक्लै छोड्दैन; मलाई लाग्यो कि यस्तो हुन सक्छ कि उनले अन्य बिरालाको बच्चालाई धेरै मिस गरेकी थिइन वा केही बेचैनी थियो, तर उसले अझै पनी। मैले थाहा पाएँ कि म गँड्यौलाहरू थिए र उनीहरूले भने कि थाइम कीरा लाग्ने रोगको लागि राम्रो छ र करिब6दिन अघि मैले तिनीहरूलाई दिन शुरु गरें र आज मैले थाहा पाएँ कि उसको मुख धेरै गुलियो छ, यो पानी जस्तो देखिन्छ, तर उसले सामान्य खाना खान जारी राख्यो। यो तपाईसँग भएको के हुन सक्छ? यो थाइम वा अरु कुनै कारण हुन सक्छ?
धन्यबाद। शुभ दिउँसो।
मोनिका डेलगाडोलाई जवाफ दिनुहोस्
चिन्ता नलिनुहोस्, थाईम बिरालाहरूका लागि विषाक्त छैन।
अत्यधिक drooling हुन सक्छ किनभने तपाईं धेरै आराम गरीरहनुभएको छ, वा किनभने तपाईंको स्थायी दाँत समाप्त भइरहेको छ र यसले तपाईंलाई केही प्रकारको असुविधा निम्त्याइरहेको छ।
यदि तपाइँ राम्ररी खानुहुन्छ र सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ भने, सिद्धान्तमा चिन्ताको विषय छैन। उसलाई केही भरिएका जनावर वा नरम बल दिनुहोस् ता कि ऊ काट्न सक्छ र आफैलाई राहत दिन सक्छ, र त्यो संग टाढा जान्छ।
अवश्य पनि, यदि सास गन्ध आउन थाल्छ, वा दाँत बाहिर खस्छ भने, म यसलाई एक चोटि लिन पशु चिकित्सकलाई लिन सिफारिस गर्दछु।
शुभ प्रभात, मेरो बिरालाले सामान्य खाना खाइरहेको छैन, उसले खानालाई बान्ता गर्छ, जब उसले पानी पिउँछ ऊ drools ...
यो के हुन सक्छ कि ऊसित छ?
नेस्टोरलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले आफ्नो मुख वा घाँटीमा दुखाइ वा असुविधा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। म उनलाई पशु चिकित्सकमा राख्न सिफारिस गर्दछु किनकि यदि उसले तीन दिन भन्दा बढि खाना खायो भने ऊ ज्यादा गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
उत्पत्ति pimartel भन्यो
नमस्कार शुभ दिन। म तिमीलाई चिठी लेख्दै छु किनकि म धेरै चिन्तित छु। मसँग6बर्षेको बिरालो छ जुन केहि हप्तासम्म यसको पछाडिको समस्या थियो, स्पष्टतः यसको यसको एउटा पञ्जासँग गर्नुपर्ने थियो, यसले आफ्नो पञ्जालाई राम्रोसँग सेट गर्न सक्दैन, म चिन्तित थिएँ र मैले बैजनी स्प्रे गरें। किराले कीरालाई मार्छ भन्ने स्प्रेले यो निको पार्छ, मैले यी सबै गरें किनकि यसमा त्यहाँ सानो प्वाल परेको थियो र यसले गन्ध र गन्धको गन्ध फैलाउन सकोस्, यसलाई किरा नपर्नबाट रोक्न मैले यो धेरै पटक राखें, तर आइतवार रातमा यसलाई फिर्ता राख्नुहोस् र भोलिपल्ट ऊ धेरै स्लोबरसँग ब्यूँझ्यो, उसले आफैंलाई समात्न दिनेछैन, ऊ ममा हुर्कायो, ऊ एकदम उग्र र अलि डरलाग्दो थियो। सत्य यो हो कि म धेरै चिन्तित थिएँ र मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने निर्णय गरें, उसलाई समात्न पागल भएँ, ऊ एकदम जंगली व्यवहार गर्थ्यो, जब अन्ततः मैले उनलाई समात्ने क्रममा मैले उसलाई एउटा बक्समा राखें र जब म गएँ यो बन्द गर्न ऊ मबाट भाग्यो। आज सम्म मैले उसलाई देखेको छैन, म सोच्न चाहन्छु कि ऊ ठीक छ 🙁 तर म केवल चिच्याउन थाल्छु जब मलाई सबैभन्दा खराब लाग्छ, ऊ सधैं leaves दिनको लागि घर छोडेर फर्केर आउँछ। तर उनले यी परिस्थितिहरूमा छोडे र मलाई के थाहा छ थाहा छैन। मलाई थाहा छ कि मसँग यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु र विश्वास गर्नु बाहेक अरु विकल्प छैन। तर के तपाई यो लागी यो एकदम विषाक्त हुनुभएको छ? यो सबै सोमबारमा भयो र आज बुधवार हो।
उत्पत्ति Pamenttel जवाफ दिनुहोस्
पशु चिकित्सा उत्पादनहरू जनावरहरूको उपचारको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। मलाई थाहा छैन कि तपाईंले के कीरा-मार्ने उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुभयो, तर यदि भोलिपल्ट उसले खराब महसुस गर्न थाल्यो भने, सायद उसलाई राम्रो लाग्दैन जस्तो लाग्छ।
तपाईंको सुझाव छ तपाईंको फोटो र तपाईंको फोन नम्बरको साथ तपाईंको क्षेत्रमा र पशु चिकित्सा क्लिनिकहरूमा पोस्टरहरू राख्नुहोस्। यसलाई खोज्नुहोस्। छिमेकीहरूलाई सोध्नुहोस् कि तिनीहरूले यो देखेको छ कि भनेर हेर्न।
म आशा गर्छु कि म फर्कनेछु।
नमस्कार, मेरो गारिता यति धेरै झुल्किन्छ कि यो उसको चिनमा जम्मा हुन्छ। मेरी बहिनी भन्छिन् कि त्यो यो हो कि उनी धेरै आराम गरीरहेकी छिन् र उनलाई सधैं यस्तो भएको थियो तर उनी यस घरमा आइपुगे पछि उनले थोरै नै खाइन् र यसका साथै धेरै दाँत तल्लो भागबाट खस्छन्। उसको मसूखहरू जाँच्न सक्षम तर मँ भन्न सक्दिन कि तिनीहरू सुढेछन् वा त्यस्तै केहि छ।
यदि उनी एक बिरालाको बच्चा छ महिना वा सो भन्दा बढी उमेरका छन् भने, स्थायी व्यक्तिहरू भित्र आउने बित्तिकै उसका दाँतहरू झर्नु सामान्य कुरा हो। तर यदि उहाँ केही उमेरको हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए किनभने उसलाई मौखिक समस्या छ जुन पशु चिकित्सकले जाँच गर्नु पर्छ।
लुर्डेस सेसिबे भन्यो
नमस्कार केही दिन अघि मेरो बिरालाले बान्ता र पेशाबको साथ शुरू गर्‍यो। यो पहिलो पटक हो कि मलाई चिक्याट छ, यो months महिना पुरानो हो र मैले यसलाई परजीवीहरूको लागि खोप लगाएको छु किनकि मलाई लाग्छ कि त्यो हो तर होईन… .. यो अझै बान्ता हो , यो खाँदैन ... .. तर डियरिया, मैले उनलाई रोकी राखें, र २ दिन अघि उनी धेरै झुक्न थालिन्, मलाई थाहा छैन के हुन्छ, ऊ तल छ, ऊ मेरो चंचल थियो, तर उनीलाई थाहा छैन। अब केहि पनि चाहानुहोस् ... मलाई के गर्ने थाहा छैन, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, धन्यवाद।
Lourdes cecibe लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं कस्तो खालको खाना खान्नुहुन्छ? मलाई यो हुन्छ कि उसलाई खाना, वा संक्रमणको एलर्जी हुन सक्छ, तर निश्चित रूपमा उसले पशु चिकित्सकलाई देख्नु पर्छ।
नमस्कार, मैले याद गरें कि मेरो बिरालोले धेरै बचेको छ, ऊ पाँच वर्षको छ, म चिन्तित छु किनभने मेरो श्रीमान्‌ले यो रेबीज हुन सक्छ र म यो गुमाउन चाहनुहुन्न भनेर भन्दछु ... .. यो रेबीजको लक्षण हो?
यदि बिरालोले बिरामी भएको अर्कोसँग सम्पर्क गरेको छैन भने, यसमा रेबीज छैन, चिन्ता नलिनुहोस्।
सम्भवतः तपाईलाई मौखिक समस्या छ, जस्तै गुहा वा सुगन्धित मसूमहरू।
मेरो सिफारिश हो कि तपाइँ उसलाई उपचार को लागी पशु चिकित्सक को लागी।
नमस्ते, मसँग बाइकोलर बिरालो छ र तिनीहरूले मलाई अर्को बिरालोको बच्चा दिए, उनीसँग उनका सबै खोपहरू छन् र शल्यक्रिया गरिएको छ, तर उनीसँग भयानक गन्ध छ जुन उनको मुखबाट बाहिर आउँदछ, जब उनी जुवा बनाउँछिन् वा नजिकै सास फेर्छिन्, जब उनी सुतेकी थिइन् धेरै, उनी पानी पिउन चाहान्छिन्, केवल दूध, र उनीले एक भाँडोमा थोरै खानेकुरा खान्छिन्, सुक्खा खाना लगभग केही पनि भएन, मैले उनको खामाहरू साना बिरालोको लागि किनेको छु र उनीलाई मन पर्छ, ऊ जेठो भए पनि, ऊ यो मासु वा कुखुरा वा माछा छ जब सम्म घर बनाइएको खाना मन पर्छ।
कृपया तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान चाहन्छु, तर म महिनाको भुक्तानी समाप्त नभएसम्म सक्दिन।
Ximena Urtubia लोपेज
तपाईले भन्न सक्ने कुराबाट उनलाई मौखिक समस्या हुन सक्छ, जस्तै gingivitis।
तपाईं ब्रश र पानीको साथ उसका दाँतहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ, वा उनको विशिष्ट दाँत सफा गर्ने व्यवहारहरू दिन सक्नुहुन्छ (घरपालुवा स्टोरहरूमा बेचेको)। तपाईं कच्चा कुखुराको पखेटा दिन सक्नुहुन्छ, हड्डी सहित समावेश गरी, दाँत सफा रहन, टार्टर बिना।
र यस समयमा अधिक केहि गर्न सकिन्न। तपाईंले पशु चिकित्सकलाई पर्खनु पर्छ तपाईसँग वास्तवमै के छ उसलाई बताउन, र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने।
मेलवी मोस्टॅसिडो भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चा धेरै drooling छ, मलाई थाहा छैन ऊ के छ र म उसलाई देखेर दुखी छु त्यसैले मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें र दाँत निकाले किनभने उनी अब धेरै चोटि पानी पिउँछिन् भन्दा पहिले उनी धेरै drools। मलाई थाहा छैन उनीसँग के छ तर म चिन्तित छु
मेलवी मोस्टासिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई दाँत तान्नको लागि सामान्य भन्दा बढी ड्रल गर्नका लागि यो सामान्य हो। यदि तपाईं खान, पिउनुहुन्छ र सामान्य जीवन बिताउनुहुन्छ भने, सिद्धान्तमा चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन। जे भए पनि, यदि तपाईले यो देख्नु भयो कि उसको सास दुर्गन्ध लाग्न थाल्छ, वा तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने शंका गर्नुहुन्छ भने, पशु चिकित्सकलाई लिन हिचकिचाउनु हुँदैन।
मग्दालेना भिसाबिल भन्यो
नमस्कार, हामीसँग पाँच वर्ष पुरानो एउटा बिरालाको बच्चा छ, उनी २ दिनदेखि निहुराईरहेकी छिन, हामीले उनको मुख जाँच गर्यौं र कुनै चोटि चोटपटक देखिएको छैन। यसको बाबजुद पनि उसले आफ्नो खाना खान्छ। हामीले उसलाई दूध र तेल दियौं, यदि उनी मादक पदार्थ छिन् भने। यसमा तपाईंको विचारको म कदर गर्दछु।
MAGDALENA VISABIL लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं सामान्य जीवन बिताउनुहुन्छ भने, यो हुन सक्छ कि दाँत चलेको छ। जे होस्, यदि केहि दिनमा यसलाई हटाईएन भने, यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सजिलो हुन्छ।
मालकम सच्चा रोड्स डोल्हर्ट्ज भन्यो
नमस्ते, मसँग १ 17 बर्षे बिराला छ, उनको आँखामा जलबिन्दु छ, मलाई लाग्दैन कि यसको यसको केही लिईएको छैन, तर उनी बिना कारण धेरै लार खसाली र मलाई चिन्ता छ कि उनीसँग कुनै छैन। नशाको संकेत, यो गम्भीर छ? म के गरौ?
मालकमा सच्चा क्यामिनोस डोल्हर्त्जलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई जिन्जीवाइटिस हुन सक्छ, तर १ at बर्षमा यो अझ गम्भीर हुन सक्छ। मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उनलाई जतिसक्दो चाँडो उपचारको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
मेरो बिरालो drooling थियो, म पशु चिकित्सक मा उनलाई लग्यो र तिनीहरूले उनलाई इंजेक्शन पछि, उनी धेरै डगमगाउन थाले र त्यसपछि यो मलाई जस्तो देखिन्छ र अब मेरो अन्य बिरालोको बच्चा नै छ, उनको जीभ सुख्खा छ र उनी गाढा drools।
Matilde लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ उसलाई अर्को पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। तपाईंलाई मौखिक समस्या हुन सक्छ, वा तपाईंको पाचन प्रणालीमा, र यसलाई पार गर्न दिइनु हुँदैन।
रोसियो जर्मन भन्यो
मेरो बिरालोको बच्चामा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै खोकी र छीँकीको लक्षणहरू छन् र म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें तर आज उनले धेरै drool बहाउन शुरू गरे, के यो उनको घाँटीबाट समान चीज हुन सक्छ? यो एक खुला थूथन संग उनको लिने छ
रोकायो जर्मेनलाई जवाफ दिनुहोस्
अकस्मात drooling सम्भवतः उनीमा रहेको श्वसन समस्याको लक्षण हो, तर यो पशु चिकित्सकले मात्र पुष्टि गर्न सक्दछ।
नमस्कार, मेरो बिरालाको बच्चा २ दिनदेखि भित्तामा छाल जस्तो देखिन्छ
र यसको दुर्गन्ध छ, यो के हुनुपर्छ?
तपाईलाई gingivitis हुन सक्छ। तर ऊ कति वर्षको भयो? यदि यो एक कुकुर छ भने, यो यो drooling छ किनभने यसको स्थायी दाँत बाहिर आउन सक्छ।
जब श in्का लाग्छ, म पशु चिकित्सकलाई सल्लाह दिन्छु।
नमस्ते! मेरो बिरालाको बच्चामा दादुरा थियो र मेरो पशु चिकित्सकले उनको लागि एन्टिफंगल सिफारिश गर्‍यो। त्यस बेलादेखि उसले drooling रोकेको छैन र म के गर्ने भनेर चिन्तित छु? धन्यबाद।
यदि उसले उपचारको सुरुदेखि नै झुक्याउन थालेको छ भने, मेरो सल्लाह छ कि तपाइँ उसलाई औषधी परिवर्तन गर्न फिर्ता लैजानुहोस्, किनभने यो हुन सक्छ कि उसले राम्रो गरिरहेको छैन।
यदि तपाइँले एक प्रश्न सोध्नुभयो भने, मेरो बिरालाले भर्खरै शल्यक्रिया गर्‍यो अपरेशन पछि बिरालाहरू जोगिन यदि उसले खायो भने २ दिन पछि उनी खाइनिन र उनी धेरै drools
केहि गलत भएको हुन सक्छ। यो सामान्य छ कि उनलाई अझै पनी धेरै पीडा महसुस भएको छ र त्यसैले उनी ढुकढुक गर्दैछिन, तर जाँच गर्न पशु चिकित्सकमा लैजाँदा त्यसले चोट पुर्‍याउँदैन।
मेरो बिरालो धेरै drools।
सेलेनालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि उनी अस्वस्थ छिन, उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस्।
मेरो बिरालोले धेरै ध्यान दियो कि म ध्यान पु pay्याउन चाहन्छु, मेरो पानीमा घुँडा टेक्दै र मलाई धेरै घस्र्यो, ऊ धेरै अक्षरशः ड्रिप्स ड्रोल गर्दछ, ऊ केवल मसँगै गर्छे, मलाई लाग्छ कि उनीले मात्र गरेकी छिन तर शाब्दिक रूपमा ड्रिप गर्दछि। drool
उसले त्यसो गर्छ किनकि ऊ तपाईंसँग हुन चाहन्छ 🙂
नमस्ते! मेरो बिराला डेढ बर्षको हो, म धेरै चिन्तित छु किनभने मेरो बिरालो सामान्य भन्दा झर्दै जान थाल्छ, ऊ प्रायः मसँग हुँदा र म उसलाई बोक्दा धेरै पिउँछु, तर हिजो राती हामीले महसुस गर्यौं कि उनले भिजेको थियो। पछाडिको पलंग, र कुनै पनि ठाउँमा उसले उसलाई भिजेको छोडिदियो, आज ऊ छेउमा चढ्यो र तल झर्न सकेन र हामीले फेरि धेरै स्लिम देख्यौं, यो फोमिया होइन, यो पानी जस्तो देखिन्छ। उसले खाने र पिउने सामान्य पानी निरन्तर गरिरहेको छ, तर मैले थाहा पाएँ कि ऊ सुतिरहेको छ। मलाई थाहा छैन यो के हुन सक्दछ।
एडनालाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ प्रभात, मसँग ११ महिनाको बिरालाको बच्चा छ, उनी गर्भवती छिन्, उनी दुई दिनदेखि झुकिरहेकी छिन्, उनी दुर्गन्धित छैनन्, उनले केवल नरम खाना खान सक्छिन्, उनले कडा पानी पिएकी छिन्, अर्कै किसिमले, र उनी। घर धेरै छोड्छ। म धेरै चिन्तित छु।
रोजारियोलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं बाहिर जानुभयो भने, यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले भाइरस समातेको छ।
मेरो सिफारिश यो छ कि तपाईं उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, न केवल बिरालोको राम्रोको लागि, तर बिरालाको बच्चाहरूको लागि पनि।
मिठो मारिया भन्यो
हेलो, उनले मलाई डल्से भनिन्, मेरो बिरालोले धेरै व्यर्थै गयो, उसको ड्रोल एकदम कुरूप गन्ध आयो र उसको दाँत कालो भयो। उसको खाना चबाएमा के दुख्छ? आज म ती लक्षणहरू लिएर घर फर्कें, तपाईले उसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ?
Dulce María लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते दुल्से मारिया।
तपाईलाई सम्भवतः gingivitis छ। तपाईले उसलाई पशु चिकित्सकमा जाँच र उपचारको लागि लैजाउनु पर्छ।
नमस्कार, मेरो नाम एक मात्र हो, मसँग बिरालो छ जुन धेरै झुकिरहेको छ, उसको बaw्गारा हल्लाउँदै छ र ऊ अलिकति रगत बगिरहेको छ
Soledad लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह तपाईले पशु चिकित्सकलाई लैजानुहुन्छ। उसले धेरै पीडा महसुस गरिरहेको हुन सक्छ र प्राकृतिक उपचार जुन तपाईले उसलाई दिन सक्नुहुन्छ उसको लागि कुनै कामको हुन नचाहने सम्भावना छ। तपाईलाई जिन्जीवाइटिस वा गम्भीर संक्रमण हुन सक्छ।
नमस्ते! मेरो बिरालाको बच्चा human मानव बर्षको छ, बुधवारदेखि म उनको खानालाई बान्ता गर्न थाल्छु र हिजो मलाई राम्रो खान चाहन्न, त्यसैले आज मैले उनलाई पशु चिकित्सक समातें र उनले मलाई उनलाई घाँटीमा संक्रमण भएको कुरा बताइदिए त्यसैले उनले उनलाई दिए। -जेन्टिमाइसिनको इन्जेक्सन- र जब म घर पुगेँ मेरी सानी केटीले धेरै नुहाउन थाले र मैले पशु चिकित्सकसँग कुरा गरें उनले मलाई सामान्य कुरा भने! तैपनि म डराएको छु म फेरि सुन्न चाहान्छु कि शान्त महसुस गर्नु सामान्य छ धन्यवाद।:
बेट्टी लाई जवाफ दिनुहोस्
हो यो सामान्य हो। केही औषधीहरूको साइड इफेक्टको रूपमा अत्यधिक drooling छ।
नमस्ते मेरो बिरालो, उनी बिहान मात्र धेरै चीजहरू निकाल्छिन् र राती उनी झुक्न रोकिन्, उनी सामान्य खान्छिन् र त्यस्तै प्रकारले कार्य गर्दछन् कि उनी सामान्य भन्दा अलि बढी दिक्क छिन्।
भर्जिनियालाई जवाफ दिनुहोस्
तिमीलाई थाहा छ ऊ गर्मीमा छ कि? यो हुन सक्छ कि यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने, तपाईं दिनको केवल अंशको लागि धेरै ड्रल गर्नुहोस्।
जे भए पनि, म सिफारिस गर्दछु उसलाई मात्र पशु चिकित्सकमा लैजाने। हेर्नुहोस् यदि तपाईं gingivitis को एक शुरुआत छ।
एम्पारो कोर्टेस मोरा भन्यो
नमस्कार, शुभ दिउँसो।
मलाई मेरो बिरालोको बच्चा र जोसे हुने समस्या छ।
ASE २ दिन उनी बाहिर सडकमा गए र आइपुगे।
केहि समय पछि मैले बुझें कि ऊ झुल्दै थियो तर
बाक्लो र एक नहाल्ने को जस्तै स्नान
मलाई थाहा छैन उसलाई के हुन्छ।
हुनसक्छ त्यहाँ खाईयो वा यसै अनुसार
यो धेरै अनौंठो छ
Amparo Cortes Mora लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले के हिसाब गर्नुभयो उसले केहि निवेश गरेको छ जसमा उसले पाउनु हुँदैन र त्यसले उसलाई नराम्रो महसुस गरायो।
मेरो सल्लाह उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह हो किनकि उनले एक कीटनाशक-उपचार गरिएको बिरुवा निगल्यो।
कार्मेन रड्रिगुज भन्यो
नमस्ते शुभ दिउँसो .. म धेरै पीडित छु किनकि मेरो year बर्षे बिरालाको बच्चा अचानक राति मरे। ऊ बिरामी परेको थिएन ११ रात मैले उसलाई राम्ररी छोडिदिएँ मेरो अर्को बिरालोको साथ दौडदै .. तिनीहरू भित्र पस्न चाहँदैनथे। रात उनीहरूको घर उनीहरूले प्राय: बाहिर गए र बाहिर निदाए भनेर गरे। तथ्य यो हो कि मैले उसलाई मरेको कुनै संकेत बिना उसको भेट भएको भेट्टाएँ कि केही पनि थिएन .. ऊ सुतेको थियो .. त्यहीं कुनै बान्ता वा पखाला थिएन, उसको सामान्य जिब्रो केही थिएन जस्तो कि ऊ निदाएको छ र अब ब्यूँझिएको छैन। म चाहन्छु कि उनीहरूले मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्थे र भन्दछन् कि यो वास्तवमै उहाँसँग हुन सक्थ्यो म धेरै दुःखी छु !!
कार्मेन रड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिराला गयो 🙁
यदि तपाईंले बाहिर रात बिताउनु भयो भने, यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले विष, कीटनाशक, वा कृन्तकनाशक, वा अरू कुनै पनि इन्जेसन गर्नुभएको छ।
जवाफ दिन को लागी धेरै धन्यबाद ..
शुभ रात्री मेरो बिरालो पछिल्लो रात देखि drooling शुरू भयो र आज उहाँ केवल मेरो छेउमा सुतेका साथै राम्रो छ उहाँ सक्रिय छ किनभने उसले खेल्छ कि उसले खान्छ तर म चिन्तित छु कि उनी यति धेरै drool हुनेछ र पशु चिकित्सकमा उनलाई लिएर भुक्तानी हुनेछ। । तर मेरो भुक्तानी धेरै 😞 छ
जोहानालाई जवाफ दिनुहोस्
तिमीलाई थाहा छ यदि उसले केही लिनु भयो कि उसले गर्नुहुन्न थियो? हुनसक्छ तपाईंले त्यस्तो चीज इन्जेस्टेड गर्नुभयो जुन तपाईंलाई बिरामी बनायो र अलि-अलि गर्दै तपाईंले सुधार गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं जहिले पनि पशु चिकित्सकलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाईंले उसलाई दुई पटक तिर्न सक्नुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि।
अर्को विकल्प भनेको तपाईंको क्षेत्रमा कुनै संगठनलाई परामर्श गर्नु हो जुन पशुहरूलाई उनीहरूको मद्दतको लागि मद्दत गर्दछ।
तपाईलाई यसको स्वाद सायद मनपर्दैन र कुनै तरिका "थुक्नुहोस्" चाहानुहुन्छ।
मारिया एलेना भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालोको drooling नियन्त्रण गर्न केहि तरीका छ? यो घृणित हो कि मैले मेरो लुगाहरू, मेरो पाना र सबै चीजहरू तल खसाल्यो। १ वर्ष र आधा र सँधै drool तर हरेक पटक drool अधिक प्रचुर हुन्छ। यो त हो जब उसले मलाई पेट पाउँन चाहन्छ। समय-समयमा केही आँसु थपिएको छ।
मारिया एलेनालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया एलेना।
यदि यो आरामबाट हो भने ड्रलिंगलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन। तर यदि उसले आँसु थाम्छ भने पनि मलाई स्वास्थ्य समस्या हो, सायद संक्रमण भएको मलाई शंका छ।
एक चोटिको लागि उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानमा चोट पर्दैन।
Anya carranza भन्यो
मेरो बिरालोको बच्चा कतैबाट पनि डुब्न थालिसकेको छ र म धेरै चिन्तित छु किनकि ऊ धेरै तानिन्छ र पूरै भुईँमा भिजेको हुन्छ, म उसलाई प्राय जसो सफा गर्छु र धेरै पानी दिन्छु तर म के गर्न सक्छु
Anya Carranza लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई जिing्गिभाइटिस हुन सक्छ र पशु चिकित्सा सहयोग चाहिन्छ।
मेरो सल्लाह यो परीक्षामा लिनको लागि हो।
मेलिसा सेब्रियन भन्यो
शुभ प्रभात, मैले टिप्पणीमा पढेको छु कि मेरो जस्तो समान पनि छ, तर बिना रक्तस्राव। र के यो कहिलेकाँही मेरो बिरालोको ब j्गारा कुनै स्पष्ट कारणको लागि डरले काम्छ (केवल जब ऊ आफ्नो मुख खोल्न चाहन्छ, जब म उसलाई उपचार गर्ने गर्छु), यो सबै समय होइन तर पर्याप्त छ (यो त्यस्तो छैन) ऊ कीरा वा चरा देख्दा शिकार कल गर्ने बेलामा उस्तै थर थर काम्दै छ), यदि उसले खान्छ, भूख छ, पिउँछ, नाटक गर्छ र गुनासो गर्दैन।
म यो पनि देख्छु कि उसको मुखको प्रवेशद्वारमा उसले लार पारेको छ जसको कारण उसको मुखको कपाल पूरै दिन भिजाई रहन्छ (पहिले भन्दा पहिले कहिले पनि)। बिराला करीव months महिना पुरानो छ, सास फेर्ने सामान्य देखिन्छ, म उसलाई परिवर्तन भएको वा केहि पनि देखाउँदिन।
यो के कारण हुन सक्छ? के मलाई चिन्ता छ?
मेलिसा सेब्रियनलाई जवाफ दिनुहोस्
यो राम्रो हुनसक्छ जब तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, पशु चिकित्सकले यसलाई हेरेमा चोट पुर्याउँदैन।
मैले एउटा बिरालोको बच्चालाई केही पनि नभएको देख्छु। ऊ भर्खरै सुतिरहेको छ र केही खाएको छैन। बिहानको घण्टामा ऊ डुब्दै थियो। कुन हुन सक्छ?
Kellys लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ - प्रभात…
हिजो मैले देखें कि उनीहरूले उनलाई एन्टिपेरासिटिक तर केही दिएनन्। आफ्नो मुख ओसिलो राख्नुहोस् र खान चाहँदैन। के त्यहाँ घर बनाउने केहि छ जुन दिन सकिन्छ?
उसको गनतीबाट, यस्तो लाग्दछ कि उसले आफूले लिनु हुँदैन केहि लिएको छ र त्यसले उसलाई नराम्रा बनाएको छ।
होममेड त्यहाँ केहि छैन, यो पशु चिकित्सकलाई जाँच गर्न यसलाई लिएर जानु उत्तम हुन्छ।
शुभ रात्री, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मेरी बहिनीको बिरालाको बच्चा फोमिंग गर्दैछ तर अत्यधिक रूपमा होइन, उनी मात्र सुतिरहेकी छिन्, ऊ केहि गर्न चाहन्न र म उसको आँखा खोल्दिन तर सास फेर्न म मेरो मुख खोल्छु वा म गर्छु के गलत हो थाहा छैन, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्
जेरेमीलाई जवाफ दिनुहोस्
सम्भवतः, उसलाई विष लागेको छ। जब यो हुन्छ, पशुलाई तत्काल पशु चिकित्सा सहायता चाहिन्छ।
मेरो बिरालाको बच्चाले धेरै तान्छ जब म उसलाई प्यारी गर्दैछु केही समयको लागि, विशेष गरी जब हामी सुत्न जान्छौं। कहिलेकाँही उनले साना खोरहरू छोडिदिन्छन् ... उनी एक धर्मपुत्र बिन्ती हुन् जसले सडकमा बस्दा दुर्व्यवहार गरीन् र उनी स्नेह पाउँदा धेरै उत्साहित हुन्छिन्। मैले बिरालोमा यो देखेको थिइनँ र सुरुमा यो मेरो चिन्ता हो, तर यो घरमा पक्कै खुसीको कुरा हो!
Rocío लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, यो किनभने यो धेरै सहज महसुस गर्छ किनभने
एन्ड्रिया पेना भन्यो
नमस्ते शुभ दिउँसो, म a- month महिना पुरानो बिरालाको बच्चा झन्डै २ दिनको लागि उसले अत्यधिक लार प्रस्तुत गरेको छ जब उसले पहिले यस्तो गर्दिन, यस बाहेक यो गन्ध आउँछ कि त्यसले केही समुद्री खाना खाएको छ, मलाई थाहा छैन कि उनी जाने थिइन विघटन भएको अवस्थामा केहि खाए किनभने उनी दिनभर घरबाट टाढा रहन्छिन र सुत्न मात्र पाइन्छ! मलाई आशा छ कि उनीहरूले मलाई जवाफ दिए।
Andrea peña लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं लामो समयको लागि घरबाट टाढा हुनुहुन्छ भने, सम्भाव्यता यो छ कि तपाईंले त्यस्तो केही खानुभएको छ जुन राम्रो छैन। जे भए पनि, यदि तपाइँ सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ भने, केहि दिनमा यसलाई पार गर्नुपर्नेछ। खराब को मामला मा, पशु चिकित्सक उसलाई लिन हिचकिचाउनुहोस्।
द एन्जिल्सको मरियम भन्यो
नमस्ते! शुभ रात्री! मसँग एउटा वयस्क बिरालाको बच्चा छ ... धेरै बुढो छ ... मैले उसलाई सडकबाट बचायो ... त्यसैले मलाई सहि उमेर थाहा छैन! उसको बायाँपट्टि मोटो ड्रोल छ र उसलाई खानको लागि गाह्रो छ ... अर्को लक्षण यो हो कि उसको जिब्रो अड्किएको छ ... मानौं ऊ क्रम्प गर्दैछ ... म उनलाई जाने गर्थे र उनको मुखमा उनले मलाई भनिन् कि उनले केहि पनि देख्दिन ... तर म शान्त रहनँ ... ऊ दिनभर सुतिरहेकी छ ... र जब उनी कर्लहरूमा सुत्छिन् उनले आफ्नो सानो शरीरलाई घिसार्छिन्। र उनको पुच्छर ... म उनलाई दु: ख भोग्न चाहान्दिन ... तर ऊ चिच्याउँदिन वा मलाई पीडा संप्रेषण गर्दछ! मद्दत! कसैलाई जिब्रोको साथ यस्तो भयो ... कसैले पनि निश्चित कुराको लागि जान्दैन ... शुद्ध अनुमान ... कृपया सहयोग गर्नुहोस्! धन्यवाद!!!
मारिया डे लस एन्जलसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया डे लस एन्जलस।
तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा तपाईंसँग दाँत हुन सक्छ जुन सताउने वा पीडादायी छ। तर मँ अधिक भन्न सक्दिन (म पशु चिकित्सक होइन)।
उनी तपाईलाई के भन्छन् हेर्न तपाईलाई सँधै अर्को पशु चिकित्सकमा लैजान सक्नुहुन्छ।
कृपया, मलाई सघाउनको लागि कसैले मलाई सघाउन तीन हप्ता अघि मैले सडकबाट एउटा सानो बिराला उठायो, म उसलाई घरमा लिएर गएँ जहाँ मसँग अरू ठूला बिरालाहरू छन्, तर यो बिरालोको तीन दिन पछि अत्यन्तै गन्ध भएकोले मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यो। उसलाई एउटा कीरामी छ, तर एक हप्ता पछि मेरो बिरालाहरू बिरामी भयो, ऊ बान्ता खान चाहँदैनथ्यो, हामी उनलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं, उनीहरूले औषधीको साथ उसको जिब्रोमा एक सानो छाला देखे, उनी निको भए। र मेरो अर्को बिरालो बिराला पतन भयो, जुन अहिले सम्म खराब छ, ऊ बान्तासँग एक हप्ता भइसकेको छ ऊ केही खाँदैन र आफैलाई राहत नपाउँदछ, तिनीहरूले आन्द्राको अल्ट्रासाउन्ड लिएका छन र ल्युकेमियालाई नकार्न कुनै विश्लेषण छैन र उसको केही कमी छैन। ऊ मात्र निको पार्दैन तर उनीहरूले उसलाई भिटामिन र खोप लगाएर सीरम दिन्छ उल्टो बान्ता र बजार रोक्न मलाई अब के गर्ने थाहा छैन, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्। मलाई थाहा छैन उनीसँग के छ वा त्यो बिरालोको बच्चाले सडकबाट उठाएको मलाई थाहा छैन। भाइरस। मलाई थाहा छैन अब के सोच्नु पर्छ
Tania_802@hotmail.com लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई धेरै दुख लागेको छ कि तपाईंको बिरालाहरू बिरामी छन्, तर हामीमा कुनै प्रकारको निदान गर्ने शक्ति छैन।
मेरो सल्लाह के हो भने तपाईले दोस्रो पशु चिकित्सकसँग परामर्श लिनुभयो, कि उसले तपाईंलाई के भन्छ भनि हेर्न।
आशा छ तपाईंको फुर चाँडै निको हुन सक्छ।
रिमिजियो क्यास्टिलो भन्यो
मेरो बिरालो भाँचिएको बaw्गाराबाट पीडित छ जब ऊ आफ्नो शुरुआती महिनामा थियो, मेरो हजुरआमाको घरबाट उनलाई बचाउन।
आजकल ऊ धेरै रुन्छ, ऊ सुताउँदा अत्यधिक डुब्छ, र मैले हेरिरहेको थिएँ, उसको फang्ग र दाँत बाहेक अरू कुनै दाँत छैन, अगाडिको दाँत भने पटक्कै देख्दैनन्, यदि तिनीहरू बाहिर पसेको छ भने, तर यदि त्यसो हो भने नयाँहरू पहिले नै बाहिर आइसकेको हुनुपर्दछ।
रिमिगो क्यास्टिलोलाई जवाफ दिनुहोस्
वास्तवमा, एक पटक स्थायी दाँत भित्र आए, यदि तिनीहरू बाहिर झर्छन् वा भाँचिए, तिनीहरू फिर्ता हुदैनन्।
जब त्यो हुन्छ, बिरालोले क्यान, सूप र त्यस्ता चीजहरू खानु पर्छ ताकि यो भोकाउनेछैन।
जे होस्, पशुचिकित्सकसँग परामर्श लिन सधैं उत्तम हुन्छ।
नमस्कार, शुभ अपरान्ह, मसँग बिरालोको बच्चा छ जो बिरामी पर्यो, उनी धेरै व्यस्त भइन्, खाउँदिन र ज्वरो आयो, मसँग अर्को ठूलो बिरालो छ जो छतमा चढ्दछ, ऊ एक दिन छोडेर बिरामी भयो, ऊ चाहँदैनथ्यो। खान वा केहि पनि उसले भर्खरै सुत्न छाडे र मेरो अर्को बिरालोको बच्चा ठीक थियो, अब मेरो ठूलो बिरालो राम्रो छ तर उनी बिरामी छिन् उनी धेरै झुकिरहेकी छिन् र हिजो उनले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगे र उनीहरूले ज्वरोको छाला लागू गरे र उनी उत्तम थिइन, रातमा उनी ठीक थिइन्, उनले आफ्नो मुख खोले जस्तै यदि मसँग क्र्याप र कठपुतली भए पनि, तर म खेलिरहेको थिएँ, आज यो फेरि खराब भयो र म धेरै चिन्तित छु। कृपया सहयोग गर्नुहोस्
तपाईंले गणना गर्नुभएजस्तो देखिन्छ, तपाईंको बिरालोले केहि समातेको हुनुपर्छ (सायद भाइरस), तर हुनसक्छ बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली भएकोले यसलाई ठूलो समस्याहरू बिना हटाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, बिरालोको बच्चाले केही हदसम्म कमजोर रक्षा प्रणालीको सम्भावना रहेको छ, र त्यसैले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ।
यस्तो परिस्थितिमा, जहाँ बिरालोलाई सम्भावित संक्रामक भाइरस संक्रमित गरिएको छ, बिरालालाई पशु चिकित्सकमा लैजाँदा अवस्थाको व्याख्या गर्नु उत्तम हुन्छ। केवल ज्वरोको उपचारले अन्तर्निहित समस्या समाधान गर्दैन।
नमस्कार, शुभ रात्री, मैले सडकबाट करिब तीन वर्ष अगाडि एउटा बच्चाको बच्चा उठाएँ, म उनलाई धेरै माया गर्छु, करीव एक बर्ष पहिले उनी हराएकी थिइन र मैले उनलाई एक महिना पछि भेटेँ, मलाई लाग्छ कि कसैले उसलाई मबाट चुरायो र तिनीहरूले उनलाई फ्याँकिदिए। पोथ्रामा उनलाई उद्धार गरे पछि मैले थाहा पाएँ कि उनी सधैं उनको जिब्रो बाहिर थिई, र अलि अलि गर्दै मैले हेरिरहेको थिए कि उनी लड्दै थिई, तर पछि ड्रोल एकदम बढी छ, जहिले उनी गन्दै र कुरूप गन्ध आउँदछन्। मैले उनलाई नुहाई दिएँ र केही समय पछि उहि उही हो, यसैले उनी धेरै झुकिछिन् र हिजोदेखि उनको ड्रओल बाक्लो छ र खराब गन्ध आउँछ। मलाई थाहा छैन उनको लागि के गर्ने। तपाई मलाई के सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ? धन्यबाद।
नुबियालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई जिन्जाइटिस हुन सक्छ। म तपाईंलाई उनलाई डाक्टरलाई जाँच गर्न सल्लाह दिन्छु र उनलाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर बताउन सक्छु।
Lark güillen भन्यो
नमस्कार !! मसँग--महिना पुरानो बिरालाको बच्चा छ र उनी eight दिनदेखि चार दिन सम्म हिंडिरहेकी छिन। म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें। उनीहरूले उनलाई डोज दिए र उनी दुई दिनको अलि सुधार भएकी छिन। अब म देख्छु कि यो फेरि एक सानो परिवर्तन गर्न को लागी तर यदि उसले खायो भने, कहिलेकाँही उनी खुशी हुन्छन् मलाई चिन्ता लाग्दछ कि ऊ टाढा जान्छ र जब उसले उनीहरुलाई डोज दिएको छ, उसको स्नायुले उसको सानो हात हल्लाउँछ। कुन हुन सक्छ ??
Alondra güillen लाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तर म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दिन। म पशु चिकित्सक होइन।
यदि तपाइँ पहिलोमा विश्वस्त हुनुहुन्न भने म तपाईंलाई दोस्रो पशु चिकित्सा राय सोध्न सिफारिस गर्दछु।
शुभ - प्रभात:
जुन १ 14, २०१ 2017 १०::10
के हुन्छ मसँग5बर्षे बिरालो छ र हिजो सम्म उसले लार थुक्न थाल्यो र यसले मलाई चिन्ता गर्‍यो किनकि उसले कहिल्यै लार पिएन, हामी छानाको घरमा बस्छौं र उसले समय - समयमा जानुपर्दछ र ऊ जान्छ अर्को घर र सामान्य फिर्ता
यो जरुरी हुनेछ कि म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानेछु
यदि तपाईंले पहिले कहिले गर्नुभएन भने, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले पशु चिकित्सकलाई देख्नुहुनेछ।
सिल्भिया। चट्टान भन्यो
नमस्ते कृपया मलाई केहि चीजको साथ मद्दत गर्नुहोस् मसँग सात बिरालाहरू छन्। काई, जो दुई धेरै drool, यो प्रशस्त छैन, तर एक पछि तुरही भिजेको छ, उनको तुरही सामान्य छ, उहाँ purrs, spree खोज्दछ, म तिनीहरूलाई फिर्ता देखेको छैन तर यो म बिरालाहरू पहिलो पटक हो र म यो जान्न चाहन्छु कि उनीहरूसँग त्यस्तो चीज छ किनकि उनीहरूसँग टार्टर छ उनीहरूको केही पनि छैन उनीहरूले मुखमा दुख्छन् म आशा गर्दछु उनीहरू मद्दत गर्न सक्दछन् तर म भन्छु तिनीहरू सामान्य छन् उनीहरूले खान्छन् र सबै थोक मात्र मिल्दछन्।
सिल्भियालाई जवाफ दिनुहोस्। चट्टान
के तिनीहरू दिनको केही खास समयमा मात्र ड्रोल गर्छन्? यो यो हो कि यदि तिनीहरू धेरै आराम पाउँदछन् भने उनीहरूको लागि यो सामान्य कुरा हो। र यदि तपाइँ तिनीहरू अन्यथा ठीक हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, मलाई लाग्दैन कि उनीहरूलाई केहि चिन्ता छ।
जे भए पनि, यदि श in्का लागेमा, म पशुचिकित्सकलाई सल्लाह दिन सिफारिस गर्दछु।
हामीलाई थाहा थिएन यो एकदम अनौंठो थियो, तर वास्तवमा हाम्रो बिरालो खुशीको लागि पागल जस्तै drools, जब उनी purrs 🙂
लुसियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मसँग बिरालो छ र आज सम्म मैले थाहा पाएँ कि ऊ यति धेरै घिसार्दै थियो कि ऊ निदाएको बेला उसले पानामा एउटा प्वाल छोडियो 🤔 मलाई थाहा छ यो के हो? मलाई थाहा छैन यदि यो हो किनकि उसले धेरै आराम गर्यो वा त्यस्तै केही
यदि उसले अरू कुनै लक्षणहरू देखाउँदैन भने, सम्भवतः ऊ यस्तो गर्थ्यो किनकि ऊ एकदम आरामित थियो 🙂
नमस्ते मसँग एउटा बिरालोको बच्चा छ र उनी दुई दिनको लागि कहिले कतै व्यस्त रहिरहेकी छन्, यदि पहिलो दिन मैले केही दु: ख पाएको देखेको थिएँ, अर्को दिन उनी सामान्य थिईन् तर उनी अझै पक्रिएकी थिई, तिनीहरूले मलाई उनको दुध दिन भने। कुनै चीजको लागी मादक पदार्थ बनेको छ तर ऊ निन्द्रामा रहन्छ, म के गर्न सक्छु वा यो सामान्य कुरा हो? मलाई थाहा छैन कि यो संक्रामक केहि हो किनभने मसँग अर्को बिरालोको बच्चा पनि छ।
Katia लाई जवाफ दिनुहोस्
अहिलेको लागि, म दुध दिन सिफारिस गर्दैन, किनकि यो खाना हो जुन बिरालाहरूसँग राम्रोसँग बस्दैन (यसले पखाला, बान्ता र चिन्ता गराउँछ)।
यदि तपाईले कुनै थप लक्षणहरू देख्नु भएन भने, उनको मौखिक समस्या हुन सक्छ, तर यो केवल पशु चिकित्सक द्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
नमस्कार सुप्रभात, मेरो बिरालाको बच्चा days दिन अघि उनीले बिरालाको बच्चा नपरोस् भनेर उनीले अपरेट गरिन् र अपरेसनको days दिनमा उनले केहि टाँका लगाई जुन उनलाई पशु चिकित्सकमा लगियो, उनले उनलाई जाँचे र मलाई भने कि यो गम्भीर छैन म लागू गर्छु एक इंजेक्शन एन्टीबायोटिक र म एक क्रीम पठाउन कि त्यो निको पारेर प्रसार गर्न,
१ 15 मिनेट पछि म मेरो बिरालाको साथ घर पुगेँ, र मैले उसलाई ताजा पानी दिएँ, उनले पिए तर उनले आफ्नो मुखमा फुलबुले जस्तै मतदान गर्न थालिन् र पाटिका एक खुट्टाको औंलाको औंलाहरू सँगै हिंड्छिन् जुन सामान्य छ।
तपाईको जवाफ को लागी धन्यवाद
होईन, यो सामान्य छैन 🙁
औषधीले सायद त्यो प्रतिक्रियालाई निम्त्यायो। उनी कसरी जान्छन् हेर्न उनलाई हेरेर जानुहोस्, र उनलाई क्रीम लगाउनुहोस्।
यो नराम्रो हुनु हुँदैन।
एन्लेली गोन्जालेज भन्यो
मसँग बिरालो छ, उहाँ एकदिन मेरो घरमा आउनुभयो, मैले उनलाई खुवाएँ र ऊ गएन। ऊ करीव २ महिनाको लागि घरमा बस्दै आएको छ र जब उनी आइपुगेका थिए, उनी परिवारका सदस्यहरुलाई भेट्न आएका थिए तर यो केहि थोरै थियो, उसले भाँडा तिमीमा राख्थ्यो र उसले थोरै तानिरहेको थियो तर करिब एक हप्ताको लागि ऊ झुकिरहेको छ अत्यधिक रूपमा, एकको शीर्षमा ड्रोलको विशाल अंश छोड्दै। मैले यो बोक्दा यसलाई याद गरेको छु, वा यो केहि परिवारमा रहेको छ तर हामी जान्दैनौं कि यो केही रोग वा के हो।
Enlleli González लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईंले अरू कुनै लक्षणहरू देख्नु भएको छैन भने, उहाँ सायद यो गर्नुहुन्छ किनकि उसलाई धेरै खुसी र आराम लागेको छ 🙂
नमस्कार, मैले मेरो बिरालालाई खुजलीको लागि स्प्रे दिएँ र स्पष्टतः उसले यसलाई चाट्यो, ऊ एकदमै लारिरहेको छ र बान्ता हो, मैले उसलाई बान्ता गरेको देख्दिन। म उसलाई नुहाएर उसको शरीरबाट उत्पादन हटाउँछु, उसले खान चाहँदैन र तल छ, ऊ सडकमा पार गर्दछ। के तपाईं नशा लाग्छ? मैले के गर्नुपर्छ?
जेलीलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाई जुन कुरा गणना गर्नुहुन्छ, हो, यस्तो देखिन्छ कि ऊ मादित थियो।
यदि ऊ आज सुधार भएको छैन भने म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चा years बर्षको छ, ऊ बाँझी रहन्छ, रेबीज विरूद्ध खोप लगाईन्छ र उनको कीरा कीर्ति प्रत्येक months महिनामा हुन्छ, हिजोदेखि (०//4२/१ she) उनले गर्मीमा रहेको जस्तो देखाउन थालेकी छिन, उनले नदेखी जोस मा एक बिरालोको बच्चा को संकेत तर मात्र हिंड्न र meows, तर आज जब मलाई धेरै लार उत्पादन मा मैले देखेको छु कि त्यो राम्रो खाने छ, म उनको दाँत जाँच गरेको छ, त्यो खराब गन्ध छैन, पसिना छैन, मेरो प्रश्न छ बिरालोहरु भने कसैलाई केहि "वेक अप कल" मोड प्रवेश गर्न सम्झनुहोस् किनकि उनको मूल मालिक (मेरी बहिनी) कलेजमा छिर्छिन् र धेरै ढिला भइसकेको छ, बिरालाको बच्चा सधैं उसको मालिक द्वारा सद्दे ब्यबहार भैरहेको छ र यस महिना उनले उनलाई सामान्य रूपमा देखिनन के ती बिरालाहरू त्यस्तै ध्यान दिनको लागि त्यस्तो क्षणहरू लिन सक्थे?
यो सामान्य हो कि, जब बिरालोले कसैसँग बलियो बन्धन स्थापित गर्दछ, जब तिनीहरू त्यहाँ हुँदैनन् भने यसले तिनीहरूलाई मिस गर्दछ।
उनको मद्दतको लागि, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उनीले लगाएको वस्त्रको एक टुक्रा उसको मालिकलाई सोध्नुहोस्। यसले बिरालालाई आश्वासन दिन्छ।
नेरी रड भन्यो
मेरो बिरालोले धेरै लार्यो, यो दुई दिनको लागि यस्तो भएको छ, र म डराउँछु कि यो रेबीज हो, मैले उसलाई कहिले पनि खोप लगाएको छैन र जंतुले मलाई धेरै तिर्नुपरेको छ, यो साहसी र जंगली छ, यो छैन। बायाँ, मैले यसलाई एक दिन अघि भ .्या underमा तल राखेको थिएँ, पानी र खानाको साथ हेर्ने हो कि यदि तपाईले रेबीजको लक्षण देखाउँछन् भने यो १ an बर्षको पुरानो बिरालो हो। र अनौठो कुरा सुरु भयो किनभने उनले पेशाब गर्न वा दिसा गर्न नसक्ने काम गरे र उनी निराश भए, त्यसपछि मैले उसलाई एन्टिबायोटिक दिएँ र ऊ नराम्रो भयो, उसले मलाई euthanize गर्न सल्लाह दिए। ।
नेरी रॉडलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दैन कि मलाई रेबीज छ। बरु, मलाई लाग्छ कि यसमा बुढेसकालका लक्षणहरू छन्।
पहिले पशुचिकित्सकलाई परामर्श नगरी औषधि दिनु हुँदैन: यो घातक हुन सक्छ।
मेरो सल्लाह एक पेशेवरलाई परामर्श गर्न हो। क्लिनिकमा जानुहोस्, बिरालो बिना, र कुनै लक्षण बिर्सन बिना के हुँदैछ बताउनुहोस्। धेरै मिलनसार नहुनु, यो लिनको लागि उपयुक्त छैन, किनकि यसले तपाईंलाई तनावमुक्त गर्न सक्छ र वास्तवमा खराब समय हुन सक्छ।
क्रिस्टिना बन्दी भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालो खानको लागि धेरै राम्रो छ, तर तीन दिनको लागि, ऊ एकदम थोरै खान्छ र पानी एकै समयमा, उसले धेरै लारलाई भोट दिन्छ र जेलीजस्तो सवारी गर्छ, कहिलेकाहीं उसको शरीर हिलिन्छ र ऊ प्रोत्साहित बिना निदाउँछ, ऊ हो। सुपर खेलौना तर समयमा उहाँ मात्र सुत्नुहुन्छ
क्रिस्टिना बन्दीलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म एक पशुचिकित्सक होईन र मँ उसलाई के भयो भनेर भन्न सक्दिन।
नमस्ते, मसँग लगभग years बर्षको बिरालो छ र बिहान उनि पानी जस्तो झिक्न थाल्छे र यो राम्रो वा नराम्रो कुरा हुने छैन, मैले उनको दाँत जाँच गरेँ र उनीमा केही गल्ती छैन। र योसँग अन्य कुनै अनौंठो लक्षण छैन
सब्रिनालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि उसले यो एक पटक मात्र गरेको छ र पूर्ण सामान्य जीवन बिताउँछ भने, सिद्धान्तमा म चिन्तित हुने छैन। तपाईंले भर्खरै धेरै आराम महसुस गर्नुभएको हुन सक्छ।
मेरो बिरालोको बच्चा मात्र months महिनाको छ, उसको संक्रमण छ र मैले उनलाई पहिले नै पशु चिकित्सकमा लगेको छु र ऊ पहिले नै उसको छालामा छ, तर आज उसले फोमको टुक्रा निकालेको छ x त्यसको मुखको अनुहार भयो किनकि वा म उसलाई लिएर जान्छु। पशु चिकित्सक, धन्यबाद।
जब बिरालोले यसरी धेरै छुटकारा दिन्छ किनकि त्यसले केही लिईसकेको छ (वा तिनीहरूले उनीमाथि केही राखेका छन्) जसले उसलाई नराम्रो महसुस गराएको छ।
सबै भन्दा राम्रो कुरा पशु चिकित्सकलाई लगिनु हो।
Andres Huante भन्यो
नमस्ते! म के गर्न जान्न चाहन्छु, हिजो बिरालोले हिजो धेरै drool गर्न थालेको छ, बूढा र Drool को थोपा खस्दैछ कि एक पोखर छोड्छ, यो पनि लाग्छ यदि उसको नाकबाट थोपा बाहिर आउँदैछ, यो अविश्वसनीय छ रकमबाट यसले सबै भिजेको छोडिदिन्छ, म चिन्तित छु, उसको रेबीज खोप छ र ऊ कीराण छ, मलाई के थाहा छैन
Andrés Huante लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले के हिसाब गर्नुभयो भने तपाईलाई श्वास रोग लाग्न सक्छ।
सम्भवतः यी चिसोका पहिलो लक्षणहरू हुन्। तर यो केवल एक पशु चिकित्सक द्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
मलाई आशा छ तपाईंको बिरालो सुधार छ।
नमस्कार, मेरो बिरालो4बर्षको भयो, उसले अरू बिरालाहरूसँग खेल्दै सडकमा दिन बित्छ। यो निर्जीव छैन। दुई दिन अघि उसले आफ्नो आवाज गुमायो (उसले आफ्नो मुख म्याउ खोल्दछ तर कुनै प्रकारको आवाज निकाल्दैन), ऊ दिनको प्रायः सुतिरहेको छ, पहिले भन्दा बढी। ऊ अब खेल्दैन। हिजो मैले थाहा पाएँ कि ऊ निक्कै बाहिर गयो, ऊ सुतेको ठाउँमा पुग्छ। मैले उसको मुख जाँच गरें तर त्यहाँ केहि छैन, र मलाई लाग्यो कि ऊ मादक पदार्थ पाएको थियो ... तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? म धेरै चिन्तित छु, धन्यवाद।
माफ गर्नुहोस्, तर मँ यो भन्न सक्दिन कि यो के छ। म पशु चिकित्सक होइन।
उसलाई साधारण चिसो हुन सक्छ, तर पशु चिकित्सकले मात्र तपाईंलाई यो बताउन सक्छ।
शान्टल डायज भन्यो
नमस्कार, मेरो बिराला ११ बर्षको छ, मैले सँधै उनको ठोस बिरालोको खाना खुवाएको छु र महिनामा एक पटक म उनलाई नरम बिरालोको खाना खुवाउन सक्छु, ऊ कहिल्यै सक्रिय भएकी छैन जबदेखि हामी उनलाई घरमा ल्यायौं किनकि उसको पहिल्यै उसको खुट्टा थियो। भाँचिएको छ (हामीले यसलाई कहिले सच्याउन सक्दैनौं र यो टेढो थियो)। कुरा के छ भने यो दुई दिन भएको छ जब मैले याद गरे कि उनी सुतेपछि लार उनको टाउकोबाट टिप्न थाल्छ, र मैले पनि उनको सानो आँखामा सामान्य भन्दा अलि बढी अलि बढी देखी। मेरो बिरालोले के गर्न सक्छ? म तपाईंको प्रतिक्रिया कदर गर्दछु।
शान्टल डियाजलाई जवाफ दिनुहोस्
यो पुरानो हुन सुरु हुन सक्छ। बिरालाहरू सामान्यतया त्यो उमेरमा गर्छन्।
जे होस्, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं उनलाई डाक्टरलाई लिन एक नजर राख्नुहोस्, किनकि उनि gingivitis को सुरुवात वा अन्य समस्या हुन सक्छ।
नमस्कार, मसँग दुई पुरुष बिरालाहरू छन् ... स्पष्ट रूपमा उनीहरूले अर्को बिरालोसँग लडेका छन् यसले तिनीहरूका पछाडिको चोटहरूमा चोट पुर्‍याएको छ ... जब म क्रीम लगाउँछु उनीहरूले चाट्छन् र यसलाई हटाउँदछन् ... तिनीहरूलाई निको पार्नु पट्टी आवश्यक हुन्छ? उनीहरूको घाउ ???
महिमालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि ती लि l्ग गर्दैनन् भने, तिनीहरूलाई पट्टी लगाउन आवश्यक छैन। 🙂
Mireya Zhina भन्यो
मेरो बिरालो एक वर्ष पुरानो छ र कहिलेकाँही उनी डुल्छिन् र यो पछ्याउँदैन तर त्यसको साटो होइन र जब म उसलाई सफा गर्न चाहन्छु उनी रिसाउँछिन् र मलाई डर छ कि यो केहि खराब छ।
Mireya Zhiña लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले याद गर्नुभयो कि जब उनी drools जब उनी धेरै आराम गर्छिन् भने? यदि त्यसो हो भने चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन।
अब, यदि तपाइँ अरू कुनै लक्षणहरू देख्नुहुन्छ भने, म पशु चिकित्सकसँग परामर्श सिफारिस गर्दछु।
लिसेट हर्नान्डेज भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालाले दिनको लागि धेरै लार बनाइरहेको छ र खाने बेलामा यसले थोरै दुखाइ दिन्छ, यसको जीभमा कटौती भएको छ, यो के हुन सक्छ?
लिसेट हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई रोग हुन सक्छ, तर पशुचिकित्सकलाई हेर्न उत्तम हुन्छ।
मेरो बिरालोको घाउ छ जुन धेरै खुर्को गर्दा संक्रमित हुन्छ, ऊ निन्द्रामा छ र उसको शरीर थोरै तातो छ। म के गर्न सक्छु? 🙁
Orelzz लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सुझाव छ तपाईलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् घाउ निको होस्।
कार्लोस नरभाइज भन्यो
नमस्कार, मसँग एक बर्षे पुरानो बिराला छ जुन हप्ताको लागि धेरै drooling शुरू गरिसकेको छ र उसले धेरै पानी पिउँछ, तर गम्मी होइन र यदि उसले खान्छ भने
कार्लोस Narvaez लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु पशुचिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्, यदि केही केस छ भने, यदि उसलाई कुनै मौखिक समस्या छ कि भनेर हेर्न।
मेरो बिराला स्वस्थ र सामान्य छ, तर उनी धेरै drools जब म उसलाई माया गर्छु, के यो सामान्य हो?
हो यो सामान्य हो। चिन्ता नगर।
नमस्कार, केहि महिना अघि मैले सडकबाट दुईवटा बिरालाहरू लाई मुक्त गरें 457दिन भन्दा कम उमेरका, आज उनी months महिनाको छन, मैले ती दुवैलाई खोप लगाए र उनलाई कास्ट गरें, आज केटाले केही डरले थरथर काम्न थाले मैले उनलाई लिएँ पशु चिकित्सकले मलाई भन्यो यो भाँडाका ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छ, अब मैले थाहा पाएँ कि यो शरीरबाट गएको छैन, तर यो खान्छ र पानी पिउँछ जस्तो देखिन्छ कि यसले निल्न थाल्छ भने दुख्छ, यसले मलाई धेरै चिन्तित तुल्यायो।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु उसलाई फिर्ता डाक्टरमा लैजानुहोस्। म होईन र मसँग यो के हो भन्न सक्दिन।
Eder reyes भन्यो
मेरो बिरालो केहि पल पहिले फिर्ता आयो तर म देख्छु कि उसलाई बुलबुले संग स्लब्ध भयो र उसले नाटक गर्छ कि ऊ drool बाहिर जान दिन चाहँदैन र उसले यसलाई उसको जिब्रो संग फिर्ता राख्छ र त्यसपछि ऊ दौडन थाल्छ र त्यसपछि ऊ रोकिन्छ र meowing शुरू गर्दछ धेरै र यो केहि हो कि उसले कहिल्यै गरेन र अब ऊ ओछ्यानमा गयो
Eder reyes लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँले केहि खाएको हुन सक्छ जुन तपाइँको लागी धेरै राम्रो थिएन।
उसको मुखलाई पानीले सफा गर्नुहोस्, र यदि उसले सुधार गर्दैन, वा यदि ऊ बिग्रन्छ, उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
विकासमा नयाँ बिराला प्रजननहरू
किटलर बिराला वा हिटलर बिरालाहरू भनेर चिनिन्छ